Mandritra ny fizaran-taona, raha efa mangatsiaka loatra ny kiraro, ary mbola mafana ny kiraro, ny lamaody tsara indrindra ho an'ny vehivavy maro lamaody dia lamaody amin'ny lohataona amin'ny lohataona. Tahaka ny hoe ny kofehy amin'ny kiraro mahazatra hatramin'ny fahazazana?
Mandritra izany fotoana izany dia miaraka amin'ny kiraro izay mampifandray ny lamaody maro.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny kiraro amin'ny lohataona isika, izany hoe ny kiraro - ny karazany, ary ny fomba ifandraisana amin'ny akanjo.
Herin-damosin'ny vehivavy any ivelany
Ny kiraro amin'ny lohataonan'ny vehivavy amin'ny tendron-kiraro sy lavadrano efa hatry ny taona dia mitazona ny lohany amin'ireo karazana kiraro fararano. Na izany aza, modely hafa amin'ny hetsika mirindra no mitranga matetika. Ity lazan'olona ity dia hazavaina amin'ny fampihetseham-batana sy ny fanamafisana ny kiraro ao anaty tokotany.
Ireo mpankafy ny fomba fanao malaza dia misafidy Oxfords maoderina na chelsea "lazy", ary ireo mpifaninana amin'ny fifanandrinana na sary mahery dia misafidy ireo mpihetsiketsika mavitrika amin'ny lozisialy.
Ireo kiraro amin'ny efitra fisainana dia tsy tokony hodiovina amin'ny pataloha na akanjo lava amin'ny antsasaky ny akanjo, izay mitazona kiraro saika tanteraka. Ny pataloha na ny jeans nipitika dia tsy ny orinasa tsara indrindra ho an'ny kiraro.
Ny akanjo fohy dia mijery tsara amin'ny akanjo, manokatra ny kitrokely - pataloha fohy, akanjo fohy sy akanjo. Amin'io tranga io, ny akanjo lava midina (midi- jirgotra , capri pants ) dia tsy maintsy entina amin'ny kiraro eo amin'ny voditongotra na ny sehatra, raha tsy izany dia mamoy ny firindrany ny tarehimarika, ary mihanika kokoa ny ranjony noho ny tena izy.
Fehikibo marevaka tsara amin'ny pantalony ety, leggings ary akanjo fohy (akanjo).
Kiraro matevina amin'ny fomba fijerin'ny lehilahy (bertsy, kombaty, mpihanika) dia mifanentana tsara amin'ny endriky ny safari. Azon'izy ireo atao ihany koa ny manantitrantitra ny fifehezan'ny vehivavy romantika na ny vehivavy ao amin'ny firenena noho ny fahasamihafan'ny fifanandrinana mahasoa.
Ny kiraro hoditra amin'ny lohataon-damba eo amin'ny felatanana dia afaka mijery maotina, mendri-piderana, be fitia na mendri-piderana - miankina amin'ny halaviran'ny talon-damba, ny kiraro sy ny kiraro.
Ny avo kokoa ny kofehy - raha kely indrindra ny mpivady dia mety amin'ny sary maromaro isan'andro na tolakandro. Ny booty marevaka amin'ny kiraro bitika dia mijery tsara ireo antoko na hetsika hafa aorian'ny dimy tolakandro. Ho an'ny asa na ny fandehanana maraina dia tsara kokoa ny manao zavatra maotina kokoa.
Fitaingam-bolo fiompiana vehivavy
Boots amin'ny lohataona eo amin'ny sehatra - fivoahana ho an'izay tsy manohitra ny ho kely kokoa, saingy tsy vonona amin'izany andro izany mandany ny volany.
Ny booty amin'ny lohataona amin'ny kirany (tsy misy sehatra ao amin'ny faritry ny sock) dia mifanaraka tanteraka amin'ny karazany rehetra. Momba ny kiraro eo amin'ny sehatra ho an'ny lavany rehetra dia tsy azo lazaina - ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny haben'ny sehatra. Noho izany, tovovavy iray feno sy tena matevina dia mifanohitra amin'ny kiraro miaraka amin'ny sehatra ipertrophiste - mampitombo ny lanjany, ary amin'ny vehivavy marevaka, manohitra tsy misy dikany amin'ny tongony matevina, manopy maso azy ireo amin'ny "lalao".
Ny hatsaran-tarehy vita amin'ny lohataona maoderina dia sady mijanona ho safidy tsara indrindra. Na dia eo aza ny fandrosoana haingana ny indostrian'ny hazavana sy ny fisehon'ireo fitaovana maoderina vaovao, ny taham-pahafahana tsara indrindra amin'ny vidiny sy ny kalitao dia voatahiry amin'ny kiraro vita amin'ny fitaovana voajanahary - hoditra sy akanjo.
Mazava ho azy, ny kiraro hoditra marina dia tsy mety ho mora. Na izany aza, aza maika ny handao azy ireo noho ny vidiny lafo. Eritrereto sy ampitahao ny fiainan'ny kiraro hoditra sy ny lozam-bary eo ambaniny. Ekeo, na dia tamin'ny taona faharoa na fahatelo nanompoana (miaraka amin'ny fikarakarana sy fikarakarana sahaza), ny hatsaran-tarehy sandoka dia mijery tsara kokoa noho ny mpivady vaovao, nefa mora ihany.
Na izany aza, raha tsy manohitra tanteraka ny hoditra ianao, dia ho eo ihany ny boot lohataona. Na izany aza, miomàna fa ny mpivady tena mahery sy avo dia mety tsy maintsy mandany vola be.
Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia misy ohatra maromaro kokoa momba ny fararano ho an'ny zazavavy.
Vehivavy mpamono vady
Boots for Women's Winter Sports
Kely Lalo - 32 sary avy amin'ny lamaody amin'ny endriky ny lamaody any Lalo
Black swimsuit with stripes
Vehivavy jiro ho an'ny vehivavy
Boots Denim Summer
Mofomamy kely amin'ny ririnina
Fametrahana varavarana fidirana
Ny atodin'ny foetal
Ny fametrahana ny lakozia
Tavy ratsy ho an'ny ankizy
Fikarakarana fingotra fohy
Nahoana ny lehilahy no tsy te hanambady vady vehivavy?
Voangom-bozaka ao an-trano
Okroshka amin'ny rano mineraly
Azu avy amin'ny henan'omby - 5 tsara indrindra amin'ny sakafo Tatar
Ny tovovavy Julia Stiles dia nanambady an-tsokosoko an'i Preston Jay Cook
Ahoana no hanatsarana ny firaisana?
Nahoana no matetika no mitazana ilay zaza?
Gripa nandritra ny fitondrana vohoka tamin'ny vanim-potoana fahatelo
Herinandro 20 isaky ny fitondrana vohoka - ny fifandraisana voalohany amin'ny zaza sy ny fihetseham-pon'ny reniko
Ny vokatra ho an'ny tovon'ny tiroida izay misy iodine